" Donation for Taungbi library in Bagan"
Our goal is that the Library will playakey role in the village in terms of education awareness. Through various actions andasafe place where everyone can meet, read and learn, we want to help and support the villagers to improve their general knowledge and to inspire children and teenagers.
(၃၀.၃.၂၀၁၆)ရက် နေ့တွင် အင်းဦးကျေးရွာ ဆရာတော် ဘုရားအား အမှူထား၍ Pristine Lotus Resort မိသားစု အင်းဦးကျေးရွာ ရေလမ်းတူးဖော်ရာတွင် အင်းလေးကန်အဝင်ဝမှ ဟိုတယ်ရေလမ်းကြောင်းအထိ ပေ (၂၃၀၀) ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း (၁၆၂) သိန်းကျပ်တိတိနှင့် ဟိုတယ်ရေလမ်းမှ အင်းဦးဘုရားလမ်းအထိ ပေ(၁၂၅၀) မျှော်တိုင် ဆက်လက်စိုက်ထူရန် ငွေကျပ် (၁၅)သိန်းအား ရေစက်ချ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆပ်ကပ်ခြင်း အလှူတော် မင်္ဂလာအား အင်းဦးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၆.၀၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ညောင်ရွှေမြို့နယ် အင်းဦးကျေးရွာရှိ အင်းဦးဘုရားတွင် ကျင်းပသော (၁၀)ကြိမ်မြောက် ဆွမ်းဆန်စိမ်း စုပေါင်းလောင်းလှူပွဲ၌ Pristine Lotus Spa Resort ၀န်ထမ်းများမှ တတပ်တအား ပါဝင်၍ ဆွမ်းဆန်(၂)အိတ်လောင်း လှူခဲ့ကြပါသည်။
(၁၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ဆွမ်းလောင်းပွဲ အပြီး၌ ခေါင်တိုင်ကျေးရွာ အနီးရှိ ရွှေမျှင်တင်ဘုရားတွင် ၀န်ထမ်းများ စုပေါင်း၍ အမှိုက်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဘုရားပရ၀ုဏ် သန့်ရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
(၁၃.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် အေးသာယာမြို့သစ်ရှိ မိဘမဲ့ကျောင်းသို့ အ၀တ်အစားများနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
(၇.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေတွင် ခေါင်တိုင်ကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြက်များ၊ အမှိုက်များအား ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့် လုပ်အားဒါန ပေးလှူခဲ့ကြပါသည်။